आखिर किन प्रत्येक तीन बर्षमा चिहानबाट शवहरू निकाल्छन ? -आखिर किन प्रत्येक तीन बर्षमा चिहानबाट शवहरू निकाल्छन ? -
आखिर किन प्रत्येक तीन बर्षमा चिहानबाट शवहरू निकाल्छन ?
१ भाद्र २०७७, सोमबार १९:१० मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरु धेरै किसिमका चलनहरु मान्दछन र अनौठो तरीकाले उत्सव मनाउँछन्, तर आज हामी तपाईलाई त्यो चाडको बारेमा बताउनेछौं जुन लास संग मनाईन्छ ।
हो, तपाईंले यस चाडको बारेमा जान्न अलि अनौंठो महसुस गरिरहनु भएको हुनुपर्दछ, तर यो साँच्चिकै सत्य हो। इन्डोनेसियाको एउटा विशेष जनजातिले यस चाडलाई मनाउँछ, जुन माने फेस्टिवलको रूपमा परिचित छ।
Ma’Nane महोत्सव लगभग १०० बर्ष पहिले शुरू भयो। बाराप्पु गाउँका मानिसहरूले यस उत्सवको पछाडि धेरै रोचक कथा सुनाउँछन्। मानिसका अनुसार तोराजन जनजातिको एक शिकारी सयौं वर्ष अगाडि जङगलमा शिकारको लागि गएको थियो।
पोङ रुमासेक नाम गरेको शिकारीले समुद्र तट जङगलमा एउटा लास देख्यो। रुमासेकले सडेको लास देखेर रोके। उनले लाशलाई आफ्नो लुगा लगाईदिए।
यस घटना पछि मात्र रुमासेकको जीवन परिवर्तन भयो र उनको दुर्दशा पनि अन्त्य भयो। त्यसबेलादेखि उनका पुर्खाहरूको लास सुशोभन गर्ने प्रथा टोरजना जनजाति बीच शुरू भयो। यो विश्वास गरिन्छ कि पूर्वजहरूको आत्माले आशिष् दिन्छ जब उनीहरूको लासको ख्याल राख्छन्।
यस चाडको उत्सव कसैको मृत्यु पछि मात्र सुरु हुन्छ। परिवारको मृत्यु पछि, तिनीहरू एकै दिनमा गाड्न छैन र धेरै दिनको लागि मनाइन्छ। यी सबै चीजहरू मृत व्यक्तिको खुशीको लागि गरिन्छ र उहाँ अर्को यात्राको लागि तयार हुनुहुन्छ।
यो यात्रालाई पुया भनिन्छ। यस चाडमा नातेदारहरूले गोरू र भैंसी जस्ता जनावरहरूलाई मार्छन् र मृतकको घरलाई सिङले सजाउँदछन्। यो विश्वास छ कि घर मा सीङ भएको व्यक्ति अर्को भेट मा समान सम्मान प्राप्त गर्नेछ।
त्यसपछि, मृतकलाई भुईंमा गाड्नको सट्टामा, मान्छेहरूले काठका कफिनहरूमा बन्द गरेपछि तिनीहरूलाई गुफामा राख्छन्। यदि १० बर्ष भन्दा मुनिका शिशु वा बच्चा मृत्‍यु भयो भने यो रूखको हाँगाहरूमा राखिन्छ। मृतकको शरीर धेरै दिनका लुगाहरूमा लपेटिएको हुन्छ यसलाई धेरै दिनसम्म सुरक्षित राख्न। मृतक लुगा लगाउने मात्र होइन तर फेसनल चीजहरू मात्र हुन्।
सजावट पछि, लोग्नेमान्छेलाई काठको कफिनमा राखिन्छ र यसलाई पहाडको गुफामा राख्छ। यसलाई बचाउन काठको पुतला राखिएको छ, जसलाई ताऊ-ताउ भनिन्छ। यो विश्वास छ कि कफन भित्रको शरीर मरेको छैन, तर बिरामी छ र जबसम्म यो सुतिरहेको छ, यसलाई सुरक्षा चाहिन्छ।
प्रत्येक ३ बर्षमा, लाशहरू फेरि बाहिर निकालिन्छन् र ती नयाँ लुगा लगाउँदछन्। यो मात्र होईन, मान्छेहरू लास सँग बसेर खाना खान्छन्। आफन्तहरूले पनि लाश बाहिर लगेको लुगा लगाए। धेरै वर्ष पछि, जब लास हड्डीमा परिणत हुन थाल्छ, त्यसलाई जमिनमा गाडिन्छ।
बच्चाले आइरन म्यानको सूट बनाएर फोटो खिचे, इन्टरनेटमा भयो भाइरल
दुनियाँका यस्तो देश, जहाँ ३० भन्दा बढी लेट हुँदैन ट्रेन, जान्नुहोस थप रोचक कुरा